ဆုံးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို လွမ်းဆွတ် တမ်းတရင်း ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ရေးစပ်ထားတဲ့ ခေးဆက်သွင် – Cele Posts
ဆုံးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို လွမ်းဆွတ် တမ်းတရင်း ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ရေးစပ်ထားတဲ့ ခေးဆက်သွင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ခေးဆက်သွင် ဟာဆိုရင် MRTV-4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကနေတဆင့် အနုပညာ လောကကို လျှောက်လှမ်း လာတာ ယခုဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင် နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ မှာတော့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းရင်း အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေးဆက်သွင် ဟာ အပျော်တမ်းTit Tok လေးတွေနဲ့ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေ ကိုလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ မကြာခဏ ဆော့ပြလေ့ရှိပါတယ်။
ယနေ့မှာတော့ ခေးက လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ ” အားလုံးက မှတ်မှတ်ရရ အစီအစဉ်မှာ ခေးရွတ်ပြတဲ့ အဖေဆိုတဲ့ ကဗျာလေး တင်ပေးပါ ဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးမို့ အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းနိုင်ကြပါစေရှင့်..” ဆိုပြီး တင်ပေးလာတာပါ။ ကဗျာလေးကတော့ ” အဖေ ကြာခဲ့ပါပြီအဖေ ရက်တွေလည်းပြောင်း လတွေဟောင်းလို့ဆောင်းအလီလီနဲ့ မိုးအခါခါဖြတ် နွေဘက်တွေလည်း မျက်ရည်စက်တွေနဲ့ အိပ်တန်းတက်ခဲ့ဖူးပါပြီ တစ်ခြားမိသားစုတွေကို အားကျ ငါးတန်းနှစ် အဖေ့အလောင်း မီးတိုက်ထဲ သွင်းရကာနီးကို သတိရမိပါသေးတယ် ကန်တော့ရင်းတွေး အဖေအိပ်နေတာလေးများဖြစ်မလား?
အခေါင်းအဖုံးကိုလှစ်ဟ ချစ်ပါရစေဦး နေပါဦး တဖွဖွခေါ်ချင်ပေမယ့် နာကျင် လွန်းလို့ မအော်နိုင်တော့ ပါဘူး လွမ်းတယ် အဖေ မုန့်ဖိုးလေးတွေ အရင်လိုပေးပါ စာမရတဲ့အခါ လာဆူပေးပါ သီချင်းတွေဆိုလို့ အဖေ့သမီးအငယ်မ ကပြချင်သေးတာ စစနောက်နောက် စိတ်ကောက်ချင်သေးတာ ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာနိုင်တာ သိပေမယ့် ကောင်းမှုတခု နေ့စဉ်ပြုရင်း သမီးဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆို သံသရာ တကွေ့ကွေ့ ပြန်တွေ့ပါရစေ အဖေ ” ဆိုပြီးသူမရဲ့ဖေဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Source:Khay Sett Thwin’s FB
ဆုံးသှားပွီ ဖွဈတဲ့ ဖခငျဖွဈသူကို လှမျးဆှတျ တမျးတရငျး ကဗြာလေး တဈပုဒျ ရေးစပျထားတဲ့ ခေးဆကျသှငျ
ပရိသတျကွီးရေ ခေးဆကျသှငျ ဟာဆိုရငျ MRTV-4ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲကနတေဆငျ့ အနုပညာ လောကကို လြှောကျလှမျး လာတာ ယခုဆိုရငျ အောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျ နပွေီဖွဈပါတယျ။လကျရှိ မှာတော့ မိခငျဖွဈသူနဲ့ ဘဝကိုပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးရငျး အနုပညာ အလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျ နတောပဲဖွဈပါတယျ။ခေးဆကျသှငျ ဟာ အပြျောတမျးTit Tok လေးတှနေဲ့ ဟာသဗီဒီယိုလေးတှေ ကိုလညျး သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ မကွာခဏ ဆော့ပွလရှေိ့ပါတယျ။
ယနမှေ့ာတော့ ခေးက လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျမှာ ” အားလုံးက မှတျမှတျရရ အစီအစဉျမှာ ခေးရှတျပွတဲ့ အဖဆေိုတဲ့ ကဗြာလေး တငျပေးပါ ဆိုလို့ တငျပေးလိုကျပါတယျနျော…
ကိုယျတိုငျရေးထားတဲ့ ကဗြာလေးမို့ အမှတျတရ သိမျးဆညျးနိုငျကွပါစရှေငျ့..” ဆိုပွီး တငျပေးလာတာပါ။ ကဗြာလေးကတော့ ” အဖေ ကွာခဲ့ပါပွီအဖေ ရကျတှလေညျးပွောငျး လတှဟေောငျးလို့ဆောငျးအလီလီနဲ့ မိုးအခါခါဖွတျ နှဘေကျတှလေညျး မကျြရညျစကျတှနေဲ့ အိပျတနျးတကျခဲ့ဖူးပါပွီ တဈခွားမိသားစုတှကေို အားကြ ငါးတနျးနှဈ အဖအေ့လောငျး မီးတိုကျထဲ သှငျးရကာနီးကို သတိရမိပါသေးတယျ ကနျတော့ရငျးတှေး အဖအေိပျနတောလေးမြားဖွဈမလား?
အခေါငျးအဖုံးကိုလှဈဟ ခဈြပါရစဦေး နပေါဦး တဖှဖှချေါခငျြပမေယျ့ နာကငျြ လှနျးလို့ မအျောနိုငျတော့ ပါဘူး လှမျးတယျ အဖေ မုနျ့ဖိုးလေးတှေ အရငျလိုပေးပါ စာမရတဲ့အခါ လာဆူပေးပါ သီခငျြးတှဆေိုလို့ အဖသေ့မီးအငယျမ ကပွခငျြသေးတာ စစနောကျနောကျ စိတျကောကျခငျြသေးတာ ဘယျတော့မှ ပွနျမလာနိုငျတာ သိပမေယျ့ ကောငျးမှုတခု နစေ့ဉျပွုရငျး သမီးဆုတောငျးတိုငျးသာ ပွညျ့မယျဆို သံသရာ တကှကှေ့ေ့ ပွနျတှပေ့ါရစေ အဖေ ” ဆိုပွီးသူမရဲ့ဖဘှေတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားထားတာ ကိုတှရေ့ပါတယျနျော။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။
လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွား ဆိုသလို တစ်ခါ တစ်လေ စိတ်အခန့်မသင့်ရင် ရန်ဖြစ် တာတွေ ရှိတယ်လို့ပြောလာတဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ
The Voice Myanmar Season (3)မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ ရတဲ့ အခက်အခဲ တွေကို ရင်ဖွင့် လာတဲ့ ခင်ရတနာစိုး